‘बेबी सावर’ मा रमाउदै बो-ल्ड अभिनेत्री प्रियंका, कहिले जन्मिन्छ बच्चा? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / ‘बेबी सावर’ मा रमाउदै बो-ल्ड अभिनेत्री प्रियंका, कहिले जन्मिन्छ बच्चा?
‘बेबी सावर’ मा रमाउदै बो-ल्ड अभिनेत्री प्रियंका, कहिले जन्मिन्छ बच्चा?
admin July 5, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 307 Views
काठमाडौँ, असार २० । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले ‘बेबी सावर’ गरेकी छिन् । प्रियंकालाई उनका सथिहरुले ‘बेबी सावर’ पार्टी दिएका हुन्। बेबी सावर सामान्यतय गर्भवती महिला सात देखि आठ महिना पुगेपछि केहि नजिकको साथीहरु र परिवारको सदस्य उपस्थित भएर मनाउने गरिन्छ। नेपालमा भने गर्भवती महिला सात देखि आठ महिना पुगेपछि ‘दही-चिउरा’ खुवाउने चलन थियो। तर पछिल्लो समय यो चलन नेपालमा पनि भित्रिएको छ।
केहि महिना अघि सामाजिक संजालमा आफु गर्भवती भएको खुलासा गरेकी अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई धेरैले ट्रोल बनाएका थिए । केहि न केहि कारण चर्चामा आइरहने प्रियंका अहिले भने उनि आफ्नो ‘बेबी बम्प’ देखाएर खिचिएको तस्विरको कारण चर्चामा छिन्। अभिनेता प्रियंकाले केहि वर्ष अघि अभिनेता आयुष्मान जोशीसंग विवाह गरेकी थिइन्।
प्रियंका बेला-बेलामा चर्चामा आइरहन्छिन। उनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा निकै नै सक्रिय छिन् । उनको हाल इन्स्टाग्राममा १० लाख भन्दा बढी फलोअर्स छन्। लामो समय देखि प्रियंका कुनै पनि काममा देखिएकी छैनन् । उनि अहिले आफ्नै घरमा बसेर गर्भाअवस्थाको मज्जा लिईरहेकी छिन् । प्रियंकाले आफ्नो डेलिभर डेट ठ्याक्कै नबताए पनि आगामी सेप्टम्बर महिनापछि बच्चा जन्मिने बताएकी छिन्।
उनले आफ्नो बेबी बम्पको तस्विर सामाजिक संजालमा शेयर गरिरहन्छिन्।
अभिनेत्री प्रियंका नेपालि फिल्म क्षेत्रको एक सफल अभिनेत्री हुन् । उनि फिल्मको साथै म्युजिक भिडियोमा उत्तिकै प्रचलित छिन्।
Next धादिङबाठ टिकटक बनाउने महिला पक्राउ, गरेकी थिईन अनौठो हर्कत सबै चकित